နေအိမ် / Archives for Belgium Arbitration
16/07/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, မော်လ်ဒိုဗာကဆန့်ကျင်တင်သွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိ၏နံပါတ်တစ်မြင့်တက်မမြင်စဖူး. ယင်း၏တရားစီရင်ရေးစနစ်ကအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းပပျောက်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အဖြစ်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိအရေးပါတဲ့ tool ကိုနှင့်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများအတွက်အာမခံချက်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည်. နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာမော်လ်ဒိုဗာကနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်, ယင်း၏ပန်းတိုင်တစ်ခုထက်ပိုဆွဲဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, သြစတြီးယားအနုညာတစီရင်, ဘယ်လ်ဂျီယံအနုညာတစီရင်, တရုတ်အနုညာတစီရင်, စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနပဋိညာဉ်စာတမ်းစာချုပ်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ဂျာမဏီအနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, ဣသရေလအမျိုးကိုအနုညာတစီရင်, အီတလီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, လူဇင်ဘတ်အနုညာတစီရင်, မော်လ်ဒိုဗာအနုညာတစီရင်, နယ်သာလန်အနုညာတစီရင်, နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း, အိုမန်အနုညာတစီရင်, ပဲရစ်အနုညာတစီရင်, ရိုမေးနီးယားအနုညာတစီရင်, ရုရှားကအနုညာတစီရင်, SCC အနုညာတစီရင်, စပိန်အနုညာတစီရင်, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်, တူရကီအနုညာတစီရင်, ယူကရိန်းအနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်